🥇 ▷ Taasi waa & # 039; s sida ay u shaqeyso Apple Arcade, sicirka labanlaab ee Apple ee ciyaaraha fiidiyowga ✅
Taasi waa & # 039; s sida ay u shaqeyso Apple Arcade, sicirka labanlaab ee Apple ee ciyaaraha fiidiyowga
Waxaa la shaaciyey Sebtember 19 laakiin waxaa horay u heli kara isticmaaleyaal badan oo ku jira barnaamijka ‘iOS’ 13 Beta, Apple Arcade ayaa durbadiiba laga dooday oo waxaan ku raaxeysan karnaa iPhone-ka iyo iPad-ka (iyadoo la raacayo sharadka). Adeegga fiidiyowga ciyaarta ee Apple wuxuu ku siinayaa buugga tusmada oo dhowaan gaari doona 100 kulan oo fiidiyoow ah oo keliya € 4.99 bishii, iyadoo suurogal ah in lala wadaago qoyskaaga (illaa 6 xubnood)
Dhowr saacadood kadib tijaabi Apple Arcade, oo arkay buugga fiidiyoowga bilowga ah, Waxaan ku tusinaa sida ay u shaqeyso, waxyaabaha astaamahani leeyihiin iyo sidoo kale marka hore fiiro gaar ah u yeelo qaar ka mid ah iftiiminta. Ma waxaad dooneysaa inaad ogaato inaad u qalanto inaad tijaabiso adeeggan cusub ee Apple?
Apple Arcade waa qayb ka mid ah App Store. Muhiim maahan inaad soo degsato codsi kasta oo madax-bannaan, waa adeeg ay Apple bixiso iyada oo loo marayo dukaankeeda app oo waad iska diiwaan gelin kartaa isla dukaankaas, sida iibsashada kasta oo aad ku sameyso. Waqtigaan la joogo waxaan heysanaa bil tijaabo ah oo bilaash ah, in ka badan waqti ku filan oo aan ku ogaan karno haddii ay kugu qanciso oo aad u qalanto inaad bixiso lacagta ah $ 4.99 ee ay ku kacayso bil kasta. In kasta oo aad iska bixinaysid rukummada waxaad marin u heli doontaa dhammaan cayaaraha ku jira buugga ‘Arcade’, laakiin xilligan aad joojiso bixinta, waxba kama hadleysid (sida Netflix, Apple Music, Spotify, iwm.)
Haatan buugga diiwaangelintu waa 50 ciyaarood oo fiidiyoow ah, laakiin Apple waxay ballanqaaday in deyrtan ay ku yeelan doonaan in kabadan 100 kulan buugga diiwaangelinta Apple Arcadian. Ciyaar noocee ah ayaa lagu soo daray? Runtu waxay tahay soo bandhigida Apple Waxay ahayd mid aad u liidata, oo leh magacyo waaweyn oo masraxa ku jira, sida Konami ama Capcom, laakiin mudaharaadyo badan oo shaqaalaha ka mid ahaa. Si kastaba ha noqotee, buugga macluumaadka aan arki karno maanta (waana kalabar) waa wax rajo badan oo leh ciyaaro nooc kasta ah: caadi ah, muddo gaaban, carruurta, dadka waaweyn, ficil…
Soo bandhigista Apple Arcade ee App Store ayaa aad u taxaddar badan, iyadoo la ilaalinayo qaabka dukaanka app ee Apple laakiin iyadoo la sii hagaajinayo dukaanka caadiga ah. Laga soo bilaabo daaqada ugu weyn ee Arcade waxaan ka eegi karnaa ciyaarta ugu layaabka badan, iyo marka aan galno mid ka mid ah ciyaarta fiidiyowga Waxaan aragnaa dhammaan macluumaadka la xiriira ee aadka u muuqda: da’da, nooca, tirada ciyaartoy, taageerada amarrada xakamaynta dibedda, luqadda iyo cabirka soo degsiga. Intaa waxaa sii dheer, fiidiyow ayaa nagu soo bandhigaya dhaqdhaqaaqa ciyaarta, waxaanan haysannaa shaashadyada khasabka ah.
Astaamaha Apple Arcaden
Ciyaaraha ku dhex jira Apple Arcade ayaa ah, hadda, oo gaar ah. Waqtigaan ma ciyaari kartid ciyaar kasta oo Apple Arcade ka baxsan shelf Apple, laakiin garan mayno haddii tani sidan oo kale weligeed ahaan doonto ama waxay noqon doontaa oo keliya in muddo ah oo loo sameeyay Apple in mar dambe laga heli karo App Store. Sidaa daraadeed, haddii qaabka hadda jira uu sii socdo, mar haddii aad joojiso bixinta rukhsadda ma awoodi doontid inaad ku ciyaarto ciyaarahaas qaab kale.
Da’da maahan xayiraad Apple Arcade, waxaa jiri kara ciyaaro loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn, marka waxaa muhiim ah inaad ku dhaqaaqdo xaddidaadda aaladaha ay carruurta da ‘yarta ah ku galayaan guriga. Waxa ay tahay inaadan ka walwalin ayaa ah inay jiraan waxyaabo la soo iibsaday ama xayeysiis: waa mamnuuc. Ciyaaraha oo dhami waa inay buuxiyaan labadan shuruudood oo ku saleysan qaab khasab ah, waa wax inbadan oo naga mid ahi ay soo dhoweeyaan. Ilmahaagu ma aha inay arkaan sumcad dheeri ah (mararka qaarkood aan munaasib ahayn) inta ay ciyaarayaan ciyaarta ay jecel yihiin, sidoo kale ma aha inaad sharraxdid in dheemannadaas loo adeegsaday soo iibsashada dharka cusub ay ku kacayaan lacag dhab ah.
Ciyaaraha oo dhan waa inay awoodaan in lagu soo dejiyo aaladdaada si ay awood ugu yeeshaan inay ku ciyaaraan khadadka tooska ah, in kasta oo taa macnaheedu maahan inaysan laheyn wax howlo ah oo u baahan inay ku xirnaadaan internetka, runtiina waxaa jira ciyaaro iskaashi ah oo u oggolaanaya dhowr ciyaartoy oo isku xiran. Sidoo kale waa lama huraan in lagu ciyaari karo iPhone, iPad, Apple TV iyo Mac, horumarkaasna waa in lagu wada shaqeeyaa inta u dhexeysa aaladda oo dhan, marka waxaad ku bilaabi kartaa ciyaarta tareenka dhulka hoostiisa ku yaal iyo markaad gurigaaga kusii wadid Apple TV.
Halkani waa meesha mid ka mid ah hal-abuurnimada ugu weyni ee iOS 13 ay ka soo baxdo ciyaarta: iswaafajinta PS4 iyo Xbox xakamaynta garaacista. Inaad karti u yeelato isticmaalka kontaroolada dhabta ah, iyo tan kore waa kontarooyinka tayada aan ku hadlayno, waxay ka dhigeysaa khibrada ciyaarta inaan ka fiicnaaneynno goorta aan ku qasban nahay inaan ku ciyaarno Ipadka 12,8 ”gacmaheena, ama kan Siri Remote ee TV-ga Apple. Ciyaaraha badankood waxay la jaan qaadayaan kontaroolada noocan ah, iyo sidoo kale xakamaynta MFi sida Steelseries Nimbus.
Buug yar oo waa inuu koraa
Way iska cadahay in bixinta € 4.99 ay u baahan tahay tusmooyin vidiyog ah oo tayo sare leh oo tayo leh. Xilligan waxaan heysanaa ilaa 50 ciyaarood, oo kalabar u ah wixii uu Apple Ballanqaaday dayrtan, iyo in kastoo ay jiraan ciyaaro badan oo aan caadi ahayn, runtu waxay tahay inay jiraan cinwaanno aad u xiiso badan kuwa raadinaya wax ka sii culus. Tayada waa shaki la’aan, badankooduna runtii waxay leeyihiin sawiro fiican, animations iyo dhawaaqyo (si aad u fiican ayaa lagu ciyaaraa qalabka dhegaha la gashto). Qaar ka mid ah cinwaannada aan u soo bandhigi lahaa markii ugu horreysay ee aan si dhakhso leh u fiiriyo ayaa ah:
Kaarka mugdiga: ciyaar kaar aad u xiiso badan
Wadooyinka yaryar: waa inaad xallisaa dhibaatooyinka taraafikada magaalada.
Oceanhorn 2: mid ka mid ah kuwa aan jeclahay, haddii aad jeceshahay Zelda, waad jeclaan doontaa ciyaartan fiidiyowga.
Aaway Kaararku: Ka yimid hal-abuuraha Alto Odyssey, ciyaar halxiraaf ah oo ay tahay inaad ku dhisto guryo leh kaararka
Magaalada Skate: waxaad ka sameysan doontaa isla soo saarayaasha, waxaad ku wareegi doontaa magaalada adoo wata mooto sameeye garaacaya.
Guuldaro: ciyaar badbaado ku-saleysan oo adduun-dhaafsiisan adduun-dhaaf.
Ka bax de Gungeon: a 100% retro style arcade.
Kuwani waa muunad yar oo ah waxa i siiyay waqti aan ku caddeeyo dhowrka saacadood ee adeeggu shaqeynayay. Waxaan qiraynaa fikradaada fikradaha, dabcan.
Wax cusub oo wadada hagi kara
Apple Arcade kuma faraxsana ciyaartoyga badankood, taasi waa wax iska cad. Waqtigan xaadirka ah waxay siisaa dareen ah in qalabka ugu fiican aaladeena gebi ahaanba la khasaariyo, iyo waafaqsanaanta garaacyada “dhabta ah”. Inbadan oo naga mid ah ayaa filaynay ciyaar dheeri ah, console fiidiyoo fiidiyow oo dheeri ah, inay weheliyaan kulanka ugu horreeya ee adeeggan, laakiin ma aysan ahayn. Laakiin tani waa inaysan qarin xaqiiqda ah in buugyarahan (wakhti xaddidan laakiin way is beddeli doonto) waxaa jira ciyaaro tayo sare leh oo dad badani ku raaxeysan karaan.
Kuwa horeba ugu daalay nooca “freemium”, ee ah inay bixiyaan si ay ugu awoodaan inay horumar ku gaaraan ciyaarta, oo ay u arkaan sida kuwa ku qarash gareeya lacag ka badan inta aan awoodno, iyo inay u adkaystaan ​​xayeysiisyada dhibsada, mararka qaarkood ma aha ku habboon carruurta yaryar, this Apple Arcade cusub waa neef hawo hawo cusub. Waqtigan xaadirka ah waxaan haysanaa bil tijaabo ah, waqtigaasoo Apple Adigu ay tahay inaad nagu qanciso inuu kani yahay bilowga wadada.